I-China ATC iinkuni i-cnc 1325 kumzi mveliso kunye nabavelisi | JCUT
1. Izixhobo ezilishumi elinambini zigcinelwe ukutshintsha izixhobo ezikwelayini ezenzekelayo, kunye nezixhobo ezilishumi elinambini zinakho ukutshintshwa ngokukhululekileyo ukuze zihlangabezane nemisebenzi enamandla yokwenza.
2. Kuhlalutyo lokugqibela, izibonelelo ze-lamino opener ziziswa yinkqubo yokuhlangana ye-lamino engabonakaliyo enokuthi iqhubekeke. Izibonelelo zonxibelelwano olungabonakaliyo lwe-lamino zenza ukuba ukuvulwa kwe-lamino kuthandwe ngokubanzi. Xa kuthelekiswa nezinye iindlela zokunxibelelana ezingabonakaliyo, indlela yeendibano ze-lamino zonxibelelwano ezingabonakaliyo zilula ngakumbi ukufaka kunye nokuhlangana. Kuphela kufuneka ufakele isixhobo sokudibanisa kwi-crescent groove, ezi plates zimbini zicinezelwe ngokuqinileyo yiyo.
3. Kuthatha ixesha elincinci ukudibanisa ifenitshala enamaqhekeza engabonakaliyo edibeneyo ye-lamino, abantu abayi-1-2 banokuyigqibezela indibano yefenitshala iphela, ukonga ixesha kunye nomsebenzi. Ke ngoko, umatshini wokusika weLamino uthandwa ngakumbi kwaye uyathandwa.
4. I-aesthetics yesinxibelelanisi se-lamino-indlela yokutshixa yokutshixa, uyilo oluhle; ubuchwepheshe obunamandla bokungena, ubuchule boqhakamshelwano; indibano elula ye-disasakhe-elula kunye ne-disassembly, amaxesha angenamda; ayibonakali ngokupheleleyo --- Ikhabethe iyonke-iyinto engabonakaliyo, ekumgangatho ophezulu ophezulu ngokwenene; Ukusebenza ngokulinganayo / uyilo lokuqwalaselwa ngokubanzi, ukusetyenziswa kwayo nayiphi na iplate.
Umatshini wokusika iziko weLamino ngumatshini okhethekileyo osetyenziselwa ukusika kunye nokufunxa ifanitshala eyenziwe ngesiko. Ingasusa kwimowudi yokusika yemveli kwaye ithembele kwimisebenzi yezandla. Inokuqonda ukuveliswa kobukrelekrele ngokudibanisa uyilo, i-disassembly kunye nesoftware yokuhlela. Icandelo leLamino elingabonakaliyo luhlobo olutsha lwesinxibelelanisi sefenitshala; Sonke siyazi ukuba ulwakhiwo oluqhelekileyo lwefanitshala yephaneli sisinxibelelanisi ezintathu-nanye. Isithathu-in-sinokuthiwa sisakhiwo esifanelekileyo sefenitshala yephaneli. Nangona kunjalo, isakhelo-sine-nye sinesiphene sendalo ekusebenziseni kwaso, esingenako ngokupheleleyo ukufikelela kwiimfuno zomthengi. Ngokukodwa xa abathengi becela ukwenza iikhabhathi zodonga ezigwetyiweyo okanye iikhabhathi ze-angle ekhanyisiweyo, ezi zintathu zingenziwa kuphela kwii-engile ezifanelekileyo.
Isizukulwana eside seLongteng R20-ibona blade + Linear ATC CNC Router
（Ubude benkxaso 28 2800 ukwenza ngokwezifiso
Inkqubo ye-Taiwan syntec
Edlulileyo: Inkqubo emine yoqoqosho yokusika iinkuni iR4
Okulandelayo: I-1325 isine spindle kunye nomgca we-ATC